mySamsung - စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များ
ဤစာရွက်စာတမ်း(“သဘောတူညီချက်”) တွင် ပါဝင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ("စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ") သည် ၀န်ဆောင်မှုပေးအပ်သည့်သူဖြစ်သည့် Samsung Asia Pte Ltd နှင့်/သို့မဟုတ် Samsung လက်အောက်ခံ အခွဲများ(“Samsung”) နှင့် ထိုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည့် သင် (“သင်” သို့မဟုတ် “အသုံးပြုသူ”) တို့အကြား ဥပဒေအရ သက်ဆိုင်ပြီး ကျင့်သုံးလိုက်နာရန်တို့အတွက် ပြဌာန်းချက်များကို ဖော်ပြပြီး သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သင်မှ သေချာစွာဖတ်သင့်ပြီး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကို သဘောတူညီမှုမရှိပါက ၀န်ဆောင်မှုများ (၀န်ဆောင်မှုကို “အသုံးပြုခြင်း” ဟု စုပေါင်းသုံးနှုန်းမည်) ကို လက်ခံခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ သင်ထည့်သွင်းထားသည့် ဤ သဘောတူညီချက် သီးခြားမိတ္တူတစ်စုံကို Samsung မှ သိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ပြင် သင် မှတ်တမ်းသ်ိမ်းဆည်းနိုင်ရန်အတွက် ဤသဘောတူညီချက် မိတ္တူတစ်စုံကို သ်ိမ်းဆည်းရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
သင်သည်အကယ်၍ (က) Samsung နှင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် တရားဝင် အသက်မပြည့်သေးသူဖြစ်ပါက သို့မဟုတ် (ခ) ၀န်ဆောင်မှုများကို ဟန့်တားထားသည့် ဥပဒေများ ရှိနေသည့် မည်သည့်နိုင်ငံမဆို သင်နေထိုင်သည့် နိုင်ငံအပါအ၀င် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများ အပါအ၀င်ဖြစ် နေပါက Samsung မှ ၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုရပါ။
ဤသဘောတူညီချက်တွင်- “၀န်ဆောင်မှုများ” သို့မဟုတ် “၀န်ဆောင်မှု” ဆိုလိုသည်မှာ MySamsung ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပြီး ဤနေရာ တွင်ပိုမိုအသေးစိတ် ဖော်ပြထားပြီး အချိန်နှင့်အမျှ ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားပြီး မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ကိုမဆို သီးခြားသဘောတူညီချက်အနေဖြင့် သင့်အား ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
“Samsung လက်အောက်ခံ အခွဲများ” ဆိုသည်မှာ တရားဝင်အဖွဲ့များ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ကော်ပရေးရှင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပါတနာများ သို့မဟုတ် Samsung မှ ထိန်းချုပ်ထားသည့် သို့မဟုတ် Samsung မှ အများအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည့် အဖွဲ့များတို့ဖြစ်သည်။ "ထိန်းချုပ်ခြင်း" ဆိုသည့်စကားရပ်ကို ဆိုလိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့မှ တိုက်ရိုက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။
စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို မည်သို့ သင်လက်ခံနိုင်သနည်း၊ Samsung မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မည်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သနည်း၊ ပြီးလျှင် သင် သို့မဟုတ် Samsung မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မည်သို့ ရပ်စဲနိုင်သနည်း
1. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံခြင်း
သင်သည် ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက်မရရှိမီ အကြောင်းကိစ္စဖြစ်လာနိုင်သဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြား အထူးစည်းမျဉ်းများကို လက်ခံရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အသုံးပြုသူကြားခံမှ တဆင့် ပါရှိသည့် ခလုပ် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရနိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ “သဘောတူညီချက်” ချက်ဘောက်စ် ကို အမှတ် အသား ပြုခြင်း သို့မဟုတ် “လက်ခံသည်” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြား အထူးစည်းမျဉ်းများကို လက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုများကို အမှန်တကယ် စတင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် အခြား အထူးစည်းမျဉ်းများကိုလည်း လက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် သင်သည် Samsung ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပြီးဖြစ်ကာ သင်ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုချိန်မှစပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည်ဟု Samsung နှင့် ကတိ ခံဝန်ချက် ထိုးပြီးဖြစ်ကြောင်း နားလည်ထားရမည်။
2. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ပြောင်းလဲခြင်း
Samsungအား အချိန်နှင့်အမျှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းများပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများကို မကြာခဏ စစ်ဆေးရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပါက Samsung မှ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုပေါ်တွင် မှတ်သားရန်အချက်ထားရှိ၍ သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း သင့်အား သိရှိနိုင်ရန် Samsung မှ ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ သတိပေးချက်ကို Samsung မှ ထားပြီးချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှု ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိခြင်းများပြုလုပ်ပါက ပြင်ဆင်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်များကို သင်မှ လက်ခံပြီး သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးလက်ရှိ ပြုပြင်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အမြဲတမ်း ဤနေရာတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အပေါ်တွင် တင်ပြထားသည့် "သက်ရောက်သည့် နေ့စွဲ"ကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် နောက်ဆုံးပြောင်းလဲထားသည်ကို သိရှိနိုင်သည်။
သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်အသုံးပြုသူကြားခံမှ တဆင့် ပါရှိသည့် ခလုပ် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရနိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာ “သဘောတူညီချက်” ချက်ဘောက်စ် ကို အမှတ်အသား ပြုခြင်း သို့မဟုတ် “လက်ခံသည်” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြား အထူးစည်းမျဉ်းများကို လက်ခံရန်အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံခြင်းမပြပါက ၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့် SingleSignOn လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် (အောက်တွင် ပါရှိသည့် အပိုဒ် ‎12.2 တွင်ကြည့်ပါ) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံခြင်းမပြုဘဲနှင့် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမဆို သင်သည် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်အား ပြောင်းလဲမှုများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အသိပေးထားပြီးနောက် ၀န်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်အသုံးပြုသည့်အခါ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလည်း သင်သည် လက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အကျိုးစတင်သက်ရောက်သည့် နေ့မှစပြီး သင်သည် Samsung ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပြီးဖြစ်သည်ဟု Samsung မှ မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်မခံရန် သင် ရွေးချယ်သည့် မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ဤသဘောတူညီချက်ကို အဆုံးသတ်ရန် လွတ်လပ်ပါသည်။
3. စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းမှု၏ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးများ
ဤသဘောတူညီချက်သည် သင်မှ သို့မဟုတ် Samsung မှ ရပ်ဆိုင်းမှုပြုလုပ်ချိန်အထိ အကျိုးသက်ရောက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်မှ ထည့်သွင်းမှုကို ပြန်လည် ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် သဘောတူညီချက်ကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။
Samsung မှ ဤသဘောတူညီချက်ကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် သင်မှ Samsung သို့ မှတ်ပုံတင် ထားသည့်အချက်အလက်များမှ သင်၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ သို့မဟုတ် သင်မှ အဆိုပါ ရပ်ဆိုင်းမှုကို သတိပြုနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည့် အခြား သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းများ အစရှိသည်တို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျော်သည့် အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကို ဆောင်ရွက်ကာ ရပ်စဲမှုများ အတွက် ရေးသားထားသည့် အသိပေးချက်ကိ အနည်းဆုံး ရက် 30 ကြိုတင်ပြီး အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ အောက်ပါအချက်အလက်များဖြစ်ပေါ်လာပါက Samsung မှ မည်သည့်အသိပေးဆောင်ရွက်မှုများပြုခြင်းမပြုဘဲ ဤသဘောတူညီချက်ကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်-
က။ သင်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊
ခ။ သင်က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြောင်းကို(တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင်၏ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများ သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့်) သေချာစွာရှင်းလင်းပြသထားပြီးဖြစ်ခြင်း၊
ဂ။ Samsung မှ သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးသူ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်နေသည့် Samsung ၏ပါတနာ သို့မဟုတ် Samsung နှင့်အတူ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်နေသူတို့မှ ၀န်ဆောင်မှုကို သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု တစိတ်တဒေသကို ထောက်ပံ့ပေးသည့်အရာကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများကို သင်မှ အသုံးပြုနေသည့် နိုင်ငံသို့) သို့မဟုတ် မည်သည့်ထောက်ပံ့ပေးသူ သို့မဟုတ် Samsung ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်နေသည့် ပါတနာတို့မှ Samsungနှင့် ပတ်သက်ဆက်သွယ်မှုကို လုံးဝရပ်တံ့ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါက ထို့ပြင် Samsung သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးသူ သို့မဟုတ် Samsung ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်နေသည့်ပါတနာတို့မှ သင့်အား သို့မဟုတ် Samsung သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်အတူ ပေးအပ်နေသည့် ၀န်ဆောင်မှုများသည် စီးပွားရေးဆန်သည့် အချက်အလက်မဟုတ်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်ခြင်း အစရှိသော အကြောင်းအရာများနှင့်အတူ အခြား ရပ်စဲစေသည့် အကြောင်းအရာများကြောင့် လည်းကောင်း၊ ပြီးလျှင်
ဃ။ Samsung မှ သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးသူ သို့မဟုတ် Samsung ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်နေသည့် ပါတနာ သို့မဟုတ် Samsung နှင့်အတူ ၀န်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်နေသူတို့မှ ၀န်ဆောင်မှုကို သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု တစ်စိတ်တဒေသကို ရပ်တံ့ရန် အသုံးချနိုင်သည့် ဥပဒေလိုအပ်ပါသည် (ဥပမာ- အသုံးချနိုင်သည့် ဥပဒေ အပြောင်းအလဲကြောင့် သို့မဟုတ် တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက် သို့မဟုတ် စစ်ဆေးကြားနာမှုများကြောင့် ဖြစ်ပါက ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု တစိတ်တပိုင်းသည် ဥပဒေနှင့်မညီဟု စဉ်းစားစရာဖြစ်လာသည်)။
ဤသဘောတူညီချက်ကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းသည် ဤသဘောတူညီချက်ပါ အချိန်ကာလအတွင်း သင်မှ သို့မဟုတ် Samsung က ရရှိမည်ဖြစ်သည့် အခွင့်ရေး၊ တာဝန်ခံမှုများ နှင့် တာဝန်ရှိမှုများ ကို အကျိုးယုတ်နစ်နာစေခြင်းများမရှိစေရ။
သင်မှ ပြင်ဆင်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လက်ခံခြင်းမရှိပါက သို့မဟုတ် ယခုသဘောတူညီချက်သည် ပြီးဆုံးပါက ဥပမာ- သင် သို့မဟုတ် Samsung က ရပ်တံ့လိုက်ခြင်းများကြောင့် သင်သည် ၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။
သင်မှ ၀န်ဆောင်မှုများကို မည်သို့ အသုံးပြုနိုင်သနည်း နှင့် Samsungမှ သင်၏ အချက်အလက်များကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်သနည်း သို့မဟုတ် သင်မှ Samsung၏ အချက်အလက်များကို မည်သို့အသုံးပြုနိုင်သနည်း
4. ၀န်ဆောင်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှုများကို ကန့်သတ်ခြင်း
ကိုက်ညီသောကိရိယာ (စမတ်ဖုန်း၊ တီဗွီ၊ နာရီ၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ ကဲ့သို့သော) (“ကိရိယာ”) တို့တွင် Samsung မှ ၀န်ဆောင်မှုများကို သင့်အားပေးနေပါသည်။
ဤသဘောတူညီချက်တွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ၀န်ဆောင်မှုများကို သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရနှင့် စီးပွားရေးပြန်လည်လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိသည့်အရာအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး သင်မှ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ မိတ္တူပွားခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းများမပြုလုပ်ရ။
ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေချိန်တွင် သင်မှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြား အကျုံးဝင်သည့် ဥပဒေ သို့မဟုတ် သင်နေထိုင်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသည့်နေရာ၏ တရားစီရင်မှုများအပါအ၀င် သက်ဆိုင်သည့် တရားစီရင်မှုနှင့် စည်းကမ်းများအား အမြဲတစေ စောင့်ကြည့်နေရပါမည်။
Samsung မှ ဆန္ဒရှိပါက မည်သည့်အချိန်မဆို ကြိုတင်အသိပေးခြင်း သို့မဟုတ် သတိပေးခြင်းများမပြုလုပ်ဘဲ အောက်ပါတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်-
က။ ၀န်ဆောင်မှုများကို ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်/ သို့မဟုတ် ပေးအပ်နေသည့် ၀န်ဆောင်မှုကို သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု တစ်စိတ်တဒေသကို ရပ်စဲခြင်း၊
ခ။ သင်၏ အသုံးပြုမှု အကောင့်ပါ အပါအ၀င် နှင့် အကောင့်မှပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် အခြားဖိုင်များအား ယာယီသော်လည်းကောင်း၊ အမြဲတမ်းအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း အချက်အလက်များရရှိနိုင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် မရရှိစေနိုင်ခြင်း၊
ဂ။ ၀န်ဆောင်မှုမှတဆင့် သို့မဟုတ် ၀န်ဆာင်မှုများအတွက် ကြိုတင်ကာလအနေဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုသည့် နေရာပမာဏ သို့မဟုတ် သင့်အားပေးအပ်သည့် ၀န်ဆောင်မှု၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို အသုံးပြုပြီး သင်မှ ပေးပို့မည့် သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိမည့် အချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေနိုင်မှုအား ကန့်သတ်မှုထားရှိခြင်း၊ နှင့်
ဃ။ ၀န်ဆောင်မှုများမှ အချို့သော သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာအားလုံးအား အချက်အလက်များအသုံးမပြုခင် ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ အလံတပ်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်စေခြင်း၊ ငြင်းဆိုခြင်း၊ အချက်အလက်ရရှိမှုကို ပိတ်ပင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားခြင်း၊
(က) ၀န်ဆောင်မှုများကို အနည်းဆုံးအနေဖြင့် လွန်ကဲသော နှောင့်ယှက်မှုများ၊ တားဆီးမှုများ သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေခြင်းများ မရှိစေရဘဲ သင့်အား ၀န်ဆောင်မှုများရရှိစေခြင်း (ခ) နှောင့်ယှက်မှုများ၊ တားဆီးမှုများ သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေခြင်းများအား နည်းနိုင်သမျှနေနိုင်ဆိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း အစရှိသည်ကို ဆောင်ရွက်ကာ Samsung မှ စီးပွားရေးဆန်သည့် သင့်လျော်သော အားထုတ်မှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Samsung မှ သင့်ထံသို့ အခြား ၀န်ဆောင်မှုပေးအပ်သည့်အရာများမှတဆင့်ရရှိသည်မှတပါး သင်မှဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန် (အသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းခြင်း အစရှိသည်တို့အပါအ၀င်) ခွင့်မပြုပါ။ ထို့အပြင် မည်သည့် အလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်သည့် ကိရိယာ (ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ဟာ့ဝဲလ် အပါအ၀င်)၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အခြားသောအရာများ (ရေးသားထားသော မှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များ) အား အသုံးပြုရန် (အသုံးပြုရန် ကြိုးပမ်းခြင်း အစရှိသည်တို့အပါအ၀င်) ခွင့်မပြုခြင်း။
သင်သည် Samsung မှ ၀န်ဆောင်မှုများမှ တဆင့်ပူးပေါင်းကာ သင့်အားရရှိစေသည့် ညွှန်ကြားမှုများအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်မှုအား သို့မဟုတ် ဆာဗာများ၊ ကွန်ယက်များ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် အခြားသော ကိရိယာများကို နှောက်ယှက်စေခြင်း သို့မဟုတ် ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများဖြစ်စေသည့် ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
အချို့သော ၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် အချို့သော ၀န်ဆောင်မှုများသည် မိုဘိုင်းကွန်ရက်မှ ပုံမှန် အသုံးပြုနိင်သည်။ သင်၏ အင်တာနက်အား ထောက်ပံ့ပေးအပ်သူမှ ယင်း၏ ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုမှု ၊ သင်၏ ကိရိယာမှ အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကြာချိန် နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် သင်မှ အသုံးပြုသည့် ဒေတာများအတွက် ကျသင့်မှုကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်ကို သတိပြုစေလိုပါသည်။ သင်သည် ၀န်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုခြင်းမပြုလုပ်ခင် ထိုကဲ့သို့သော ကျသင့်ငွေကို ပေးအပ်ရခြင်းရှိမရှိအား ၀န်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများနှင့် စစ်ဆေးရန် သင် သာလျှင် အပြည့်အ၀တာဝန်ရှိပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက် ကိရိယာ၊ အင်တာနက်ရရှိမှု (အသုံးပြုခ ပေးချေရမည်)၊အချိန်နှင့်အမျှ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ရရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် (အသုံးပြုခ ပေးချေရမည်) တို့လိုအပ်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုမှ ဟတ်ဝဲလ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပါဝင်သောကြောင့် ၀န်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည့် သင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည် ထိုအချက်များကို ဆောင်ရွက်ပြသနိုင်မှုများအား အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်မြန်နှုန်းမြင့်မားမှု ရရှိစေရန်အတွက် အခိုင်အမာတိုက်တွန်းထားပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲစေနိုင်သည့် လိုအပ်သည့်စနစ်များကို သင်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အသိအမှတ်ပြုဆောင်ရွက်ရပါမည်။
Samsung ၏ ဆန္ဒအရ ၀န်ဆောင်မှုသည် အချို့သောတိုင်းပြည်/ဒေသများတွင်သာ ရရှိနိုင်သည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အဆိုပါ နိုင်ငံ/ ဒေသများတွင်နေထိုင်ခြင်းမရှိပါက ထိုဝန်ဆောင်မှုကို သင်အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အဆိုပါ နိုင်ငံ/ ဒေသများတွင်နေထိုင်ခြင်းမရှိပါက ထိုဝန်ဆောင်မှုကို သင်သည် အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ Samsung မှ ထိုကဲ့သို့သော အချက်အလက်များကို နည်းပညာများအသုံးပြုကာ သေချာစွာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှု၏ တစိတ်တဒေသဖြစ်သည့် သင့်ထံသို့ ပြသသည့် ကြော်ငြာများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးများ သို့မဟုတ် အခြားသော အကြောင်းအရာနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို အရောင်းမြှင့်တင်လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင် Samsung က ပြသသည်ကို သင်မှ လက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်အဖြစ်အပျက်တွင်မဆို Samsung မှ သင့်အား အသိပေးခြင်း ၊ ဈေးကွက်ဆင်းသည့် အီးမေးလ်များ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်လက်များပေးပို့ခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဥပမာ- သင်မှ ၀န်ဆောင်မှုကို မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ထိုကဲ့သို့ သောအချက်အလက်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အကြောင်းအရာများကို သင်မှလက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ထားမှသာလျှင် သင့်ထံသို့ တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
6. ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများ နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအား ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းများ
Samsung မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းများနှင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို အလိုအလျောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည် (၀န်ဆောင်မှုနှင့်အတူ သင်မှ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဖမ်းဝဲလ်အား ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်းအပါအ၀င်) ("ဆေ့ာဖ်ဝဲလ်အား ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း")။ ထိုကဲ့သို့ ဆော့ဖ်ဝဲ အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းများသည် ပုံစံများတွင် ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနေနိုင်ပြီး ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရခြင်းမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊ ၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုသည့် ကိရိယာ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန် လုံခြုံရေးနှင့် ၀န်ဆောင်မှု၏ ယုံကြည်အားထားရမှုများကို မြှင့်တင်ပေးလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ အပ်ဒိတ် လုပ်ရာတွင် အမှားပြင်ဆင်ချက်များ၊ ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း ၊ ယခင်ထည့်သွင်းထားပြီး ဖြစ်သည့် ဆော့ဝဲလ်များ (ဗားရှင်းအသစ်လုံးဝပြောင်းလဲခြင်း အပါအ၀င်) ထိုအရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ကိရိယာများနှင့် အပ်ဒိတ်နှင့် မြှင့်တင်ခြင်းများတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ် အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းတွင် သင်၏ ကိရိယာအတွင်း၌ အသုံးပြုသူ၏ လက်ခံနိုင်သည့် အတွင်းပိုင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အရာတွင်သွားရောက် နေရာယူကောင်းယူနိုင်ပါသည်။
၀န်ဆောင်မှုများအတွင်းပေးအပ်သည့် အကြောင်းအရာများ နှင့် အကြောင်းအရာများအတွက် အခွင့်အရေးများ
၀န်ဆောင်မှုတွင် ရရှိစေနိုင်သည့် သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိစေနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းများ (အသံ၊ အသံများပါဝင်သည့်ဖိုင်၊ အချက်အလက်ဖိုင်၊ ရုပ်ပုံများ၊ သီချင်းများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ဗီဒီယိုနှင့် ရေးသားထားချက်များ) ("အကြောင်းအရာများ") အစရှိသည်တို့တွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများသည် ယင်းအကြောင်းအရာများအား စတင်ပြုလုပ်တီထွင်သူများအပေါ်တွင်သာ အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများတွင် ကြော်ငြာခြင်းများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ပစ္စည်းများနှင့် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အခြား ကုန်ကျစရိတ်ကျခံပေးသူမှ အကြောင်းအရာများတို့ ပါဝင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာများသည် ကြားခံသူ(ပါတနာ၊ ကြော်ငြာထည့်သွင်းသူ၊ ကုန်ကျစိရိတ်ကျခံပေးသူ သို့မဟုတ် Samsung သို့ ထိုသို့ အကြောင်းအရာများအား ထောက်ပံ့ပေးသော ကိုယ်စားလှယ်များ) ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည့် အခွင့်အရေးများမှ အကာကွယ်ပေးထားပါသည်။ သင်မှ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း၊ ငှါးရမ်းခြင်း၊ အငှါးပြန်လည်ချခြင်း၊ ချေးငွေ၊ ရောင်းချခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ထိုအကြောင်းအရာပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ခိုးယူကူးချသောအလုပ်များ (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အားလုံး) သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများအတွက် လိုင်စင်ရရှိစေရန်အာမခံထားခြင်းများကို မပြုလုပ်ရပါ။
၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းမှ ဆိုးကျိုးများဖြစ်သည့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်၊ မလျော်ကန်သည့်၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်ကောင်းသည့် အချို့သော အကြောင်းအရာများကို တွေ့ရှိနိုင်ပြီး ထိုကဲ့သို့သော ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမှုများအားလုံးသည် သင်အတွက် ဆိုးကျိုးများသာဖြစ်ပါသည်။
8. အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့် အကြောင်းအရာများအတွက် လိုင်စင်
တင်သွင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ တီထွင်ခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် အချက်အလက်များ၊ ပါဝင်သည့်အရာများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ မီဒီယာဖိုင်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုပြီး သော်လည်းကောင်း (“အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာ”) ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် Samsung နှင့် ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေပြီး ထိုအကြောင်းအရာကို အသုံးပြုသည့် အခြားအသုံးပြုသူများ အတွက် အာမခံချက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထိုအာမခံမှုများတွင် Samsung နှင့်အခြားအသုံးပြုသူများအား ပြောင်းလဲ၍ မရသော၊ ကန့်သတ်မထားသော၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၊ သစ္စာရှိမှု နှင့် မိတ္တူပြုလုပ်ရန် လိုင်စင်၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဘာသာပြန်ဆိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ လူထုအားပြခြင်းများ (“အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများအတွက် လိုင်စင်”) တို့အာမခံချက်များပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများအတွက် လိုင်စင် သည် ၀န်ဆောင်မှုပေးအပ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများအတွက် လိုင်စင်သည် (က) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများ ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ၀န်ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ နှင့်/သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများအား ၀န်ဆောင်မှုပေးအပ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့် ဆောင်ရွက်မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် လူမှုကွန်ယက် နှင့်မီဒီယာများ အပေါ်တွင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းများ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် (ခ) ကြားခံအသုံးပြုသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများမှ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ အကြောင်းအရာများအား အသုံးပြုနိုင်သည့် အသုံးပြုသူ အကြောင်း အရာအတွက် လိုင်စင် (ခွင့်ပြုချက်) ခွဲဝေပေးခြင်းများနှင့် ရရှိနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပေးအပ်ရပါမည်။
အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအခွင့်အရေး ကို Samsung မှ တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ဘဲ ၀န်ဆောင်မှုမှတဆင့် ရရှိသည့် အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအတွက် မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆှိ ကူးယူပိုင်ခွင့်များကို သင်က ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ ရှိနေသည့် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်နေသည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများအတွက် အကာအကွယ်ပေးခြင်းများနှင့် အားဖြည့်ခြင်းများသည် သင်၏ တာဝန်ခံနိုင်မှုပင်ဖြစ်ပြီး Samsung မှ သင့်ကိုယ်စား အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်းကာ အားဖြည့်ကာကွယ်ခြင်းမျိုးဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။
Samsung မှတဆင့် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုမှတဆင့် အသုံးပြုကာ ၀န်ဆောင်မှုပြင်ပရှိ အခြား တည်နေရာတစ်ခု သိမ်းဆည်းထားသည့် သင်၏ အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာအား အပိုထားရှိရန်မှာ သင်မှအပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိသည်သာဖြစ်သည်။ (ဥပမာ- မိတ္တူတစ်စုံထားရှိခြင်း၊ အွန်လိုင်း အပိုထားရှိခြင်း စနစ်အသုံးပြုကာ အပိုထားရှိခြင်း)
9. Samsung ၀န်ဆောင်မှုများလိုင်စင်
Samsung ၏ ပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ကြသော Samsung နှင့်/သို့မဟုတ် မည်သည့် ပေးအပ်သူ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပိုင်ရှင် တို့သည် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း/တရားဝင် လုံခြုံမှု ရယူထားခြင်း သို့မဟုတ် မယူထားခြင်းကို ဂရုမထားဘဲ၊ ဝန်ဆောင်မှုရှိ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသို့ တရားဥပဒေအရ တရားဝင်ရပိုင်ခွင့်များအားလုံး၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ စိတ်ပါဝင်စားမှုများအားလုံးအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုရှိ အကျုံးဝင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
Samsung မှ သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တစ်ကမ္ဘာလုံး၊ လွှဲပြောင်း၍မရနိုင်သော၊ ပြန်လည် ခွဲဝေ၍မရနိုင်သော၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ ကိုယ်ပိုင်နှင့် မူပိုင်မဲ့ လိုင်စင်ကို ပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး သင့်အား Samsung ("Samsung လိုင်စင်") မှ ပေးအပ်သည့် ပုံစံဖြင့် ပေးအပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ Samsung လိုင်စင် မှ သင့်အား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ရရှိစေနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှု၏ အကျိုးအမြတ်များကို ခံစားနင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
သင့်အား ယခုသဘောတူညီချက်တွင်ပါရှိသည့်အချက်များမှတပါး ၀န်ဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သို့မဟုတ် အားလုံးသော အခွင့်အရေးများကို Samsung က ထိန်းသိမ်းပြီး ကိုင်စွဲထားပါသည်။
သင်မှ (က) အခြားအသုံးပြုသူ/ ကြားခံအသုံးပြုသူထံသို့ ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုရန်အတွက် သို့မဟုတ် သင်၏အကောင့်အား အသုံးပြုနိုင်ရန် သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုအတွက် အာမခံပေးခြင်းများ (ခ) အခြားအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် ကြားခံအသုံးပြုသူအား ၀န်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုပြီး ပြန်လည် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများ (ဂ) Samsung လိုင်စင် သို့မဟုတ် အခြားအခွင့်အရေးများ အား အခြေခံပြီး ပြန်လည်ငှါးရမ်းခြင်းများ၊ လုံခြုံရေးအကျိုးအမြတ်များအတွက်အာမခံခြင်းများ သို့မဟုတ် Samsungလိုင်စင် သို့မဟုတ် အခြားအခွင့်အရေးများကို အခြားကြားခံများသို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းကို သင့်အားခွင့်ပြုမထားပါ။
ကူးယူခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် မူကွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေခြင်း၊ လိုက်နာမှုမရှိခြင်း သို့မဟုတ် Samsung ၀န်ဆောင်မှု(သို့မဟုတ် တစိတ်တဒေသ) ၏ ရင်းမြစ် ကုဒ်ကို ထုတ်ယူခြင်းများကို Samsungမှ ရေးသားထားသည့် ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ သို့မဟုတ် သင့်အတွက် အကျုံးဝင်သည့် ဥပဒေနှင့်အညီ လျော်ကန်စွာခွင့်ပြုထားခြင်းများ မရှိဘဲ ပြုလုပ်ခြင်းများ၊ ထို့အတူ သင်မှ အခြား ကြားခံသူအား ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံခွင့်ပြုစေခြင်းများမပြုလုပ်ရ။
၀န်ဆောင်မှုတွင် ဒီဂျစ်တယ်အချက်အလက်များအား ကာကွယ်ပေးထားသည့် နည်းပညာအားအခြေခံထားသော လုံခြုံရေး အခြေခံမှုများ ("လုံခြုံရေး ဖရိမ်ဝေါ့ခ်") များပါရှိသည်ကို နည်းလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုကို သင်မှ အသုံးပြုမှုအား အဆိုပါ လုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းမှုမှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း သေချာစွာကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
SAMSUNG ၏ ကုန်သွယ်မှုအမည်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ၀န်ဆောင်မှုအမှတ်အသား၊ လိုဂို၊ အသုံးပြုမှုအမည် သို့မဟုတ် အခြား ထူးခြားသည့် ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား လက္ခဏာရပ်များ ("Samsung ၏တံဆိပ်များ") တို့ကို ရေးသားထားသည့် သဘောတူညီချက်မပါရှိဘဲ သင်မှ အသုံးပြုခြင်းမပြုရပါ။ ထပ်မံပြောကြားရမည်ဆိုပါက Samsung အမှတ်တံဆိပ်များကို Samsungနှင့် သီးခြားရေးသားထားသည့် သဘောတူညီချက် ပါရှိမှသာလျှင် အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့အသုံးပြုမှုသည် သီးခြားသဘောတူညီချက်နှင့် ကိုက်ညီမှသာလျှင် ခွင့်ပြုပါသည်။
Samsung သို့မဟုတ် အခြား ကြားခံအသုံးပြုသူများ၏ (မူပိုင်ခွင့် နှင့် ကုန်သွယ်မှုအမှတ်တံဆိပ်အမှတ်အသားအပါအ၀င်) အခြား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အမှတ်အသားများ၊ လက္ခဏာများ ၊ ကုန်သွယ်မှု အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ၀န်ဆောင်မှုအမှတ်အသား၊ လိုဂို၊ အသုံးပြုမှုအမည် သို့မဟုတ် အခြား ထူးခြားသည့် ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား လက္ခဏာရပ်များ အား ပြောင်းလဲခြင်း ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖုံးကွယ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် ထိုအရာများနှင့် စပ်ဆက်နေသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ချက်များ ၊ ၀န်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်သည့်အချက်များ အစရှိသည်တို့အား ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ ထို့အပြင် Samsung သို့မဟုတ် အခြား ကြားခံအသုံးပြုသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အမှတ်အသားများ၊ လက္ခဏာများ ၊ ကုန်သွယ်မှု အမှတ်တဆံပ်များ၊ ၀န်ဆောင်မှုအမှတ်အသား၊ လိုဂို၊ အသုံးပြုမှုအမည် သို့မဟုတ် အခြား ထူးခြားသည့် ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား လက္ခဏာရပ်များအား အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ မှားယွင်းစွာအသုံးပြုမည့်အခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်၊ လိုင်စင်ပိုင်သည့်သူ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုခွင့်ရရှိထားသော အသုံးပြုသူ ၊ ထိုနည်းတူ အခြားအခြေအနေများ ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည့် အခြား ရောနှောစေသည့်အကြောင်းအရာများဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် အကြောင်းအရာများအား သင့်အားပြုလုပ်ခွင့်မပြုပါ။
သင်၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်၊ အကောင့်အချက်အလက်များနှင့် မူပိုင်မှုများအကြောင်းသိသင့်သည့်အချက်များ
11. မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် အသုံးပြုသူများအကောင့်
သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံပြုသောအခါ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက် အသုံးမပြုမီ (“မှတ်ပုံတင်သည့် ဒေတာ”)များကို ပေးအပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တိကျပြီး လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြည့်စုံသော မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပေးစွမ်းရန်နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် သင်၏အချက်အလက်များကို လိုအပ်သည့်အခြေအနေအတိုင်း တိကျပြီး လက်တလောအခြေအနေများကို ပြည့်စုံစွာဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြည့်စွက်ပါမည်ဟု သဘောတူညီရပါမည်။
12. စကားဝှက်များနှင့် အကောင့်လုံခြုံမှု
ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်ပြီး အသုံးပြုသူအိုင်ဒီ နှင့် စကားဝှက် (“အကောင့်ဒေတာ”) ထည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်သည်။
Samsung မှ ပိုမိုအဆင့်မြင့်သည့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း ("SingleSignOn")ဖြင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်။ ("SingleSignOn") ဆိုသည်မှာ သင်မှ အကောင့်တစ်ခုကို Samsung နှင့် ပြုလုပ်ပါက သင်မှ ၀န်ဆောင်မှုအားလုံးအား အလိုအလျောက် မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်ပါသည်၊ ၎င်းအတွင်းမှ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီကို သီးခြား အသုံးပြုသူ နှင့် အကောင့်များဖြင်ြ့ပန်လည် ရှင်းလင်းထိန်းသိမ်းအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ SingleSignOn မှ သင့်အား ၀န်ဆောင်မှုအားလုံးသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းနှင့် ထွက်ခွာခြင်းများကို ကိရိယာတစ်ခုတည်းမှ တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်း ခွင့်ပြုထားပါသည်။
အချိန်တိုင်းတွင် သင့်မှ အကောင့်အချက်အလက်များ လုံခြုံရေးနှင့်စိတ်ချရေးများကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားကြားခံလူများမှ သင်၏ အကောင့်၊ အချက်အလက်များ အတွက် ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အသုံးပြုမှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူအိုင်ဒီများ သို့မဟုတ် စကားဝှက်များအား ပုံမှန် ပြောင်းလဲပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် သင်၏ စကားဝှက်(များ)ကို ပြောကြားမိခြင်းများမပြုလုပ်မိစေရန် သို့မဟုတ် အခြားသူများအား သင်၏ အကောင့်အချက်အလက်များနှင့် အကောင့်အား အသုံးပြုနိုင်ရန် အာမခံပေးခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ရပါ။
Samsung မှ သင့်အားပေးအပ်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များအားလုံးကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် လမ်းညွှန်ချက်ကိုမဆို မှတ်သားလိုက်နာပါမည်- (က) အသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် ကြားခံအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် သင်၏အကောင့်အချက်အလက်များကို ပေးအပ်မှုများကို လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်ထားရှိခြင်းများ (ခ) သင်၏ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း သင်သို့မဟုတ် သင်၏ အကောင့်အချက်အလက်များကို မှတ်သားထားခြင်း။
အသုံးပြုသူမှ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအကောင့်ကို ပိုင်ဆိုင်အသုံးပြုသူမှ သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်ပိုင်မှ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အကောင့်အချက်အလက်များနှင့် အကောင့်အား အသုံးပြုရန်ခွင့်မပြုပါ။
ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သင်၏ မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များ အသုံးပြုမှုများ သို့မဟုတ် အခြား လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဖောက်ဖျက်မှုများကို သတိပြုမိပါက support@mysamsung.asia သို့ ပေးပို့ကာ Samsung သို့ အသိပေးနိုင်ပါသည်။
mySamsung ရှိ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များစာမျက်နှာပေါ်မှ သင်၏ မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များနှင့် အကောင့် အချက်အလက်များကို မည်သည့်အချိန်မဆို ရရှိပြီး ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
13. သီးသန့် တည်ရှိမှုနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒေတာများ ကာကွယ်ခြင်း
Samsung မှ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Samsung မှ ၀န်ဆောင်မှုများကို သင် အသုံးပြုနေချိန်တွင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များနှင့် အချက်အလက်များကို မည်သို့ ကာကွယ်ပုံနှင့် ကိုင်တွယ်ပုံကို သိရှိရန် မူပိုင်ခွင့် မူဝါဒ တွင်ကြည့်ရှု ပါ။ သင်၏ မှတ်ပုံတင်သည့် ဒေတာများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဒေတာများနှင့် အချက်အလက်များကို ဆမ်ဆောင်း၏ ကိုယ်ရေးမူဝါဒအရ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောတူညီသည်။
သင်နှင့် Samsung တို့သည် ယခု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင် မည်သို့တာဝန်ရှိသနည်း
14. သင်၏ အာမခံချက်များနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုများ
သင် မှပေးပို့သည့် အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာများနှင့် ထိုအသုံးပြုသူ၏ အကြောင်းအရာများ (SAMSUNG မှ ခံစားရမည်ဖြစ်သော ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်ဆီးခြင်း အပါအဝင်) နှင့်စပ်လျဉ်းကာ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် နောက်ဆက်တွဲများအတွက် သင်မှာသာ အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်မှ SAMSUNG အား အောက်ပါတို့အား အာမခံပြီး ကိုယ်စားပြုပေးပါသည်-
က။ အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာများ နှင့်အခွင့်အရေးများအားလုံး၏ ပိုင်ရှင်သည် သင်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ် အခြားအနေဖြင့် SAMSUNG အား ထို အသုံးပြုသူအကြောင်းအရာများလိုင်စင်ကို အာမခံရန် အခွင့်အာဏာပေးအပ်ရမည်၊
ခ။ အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာများသည် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများနှင့် အခြား ကြားခံသူများ၏ အခွင့်အရေးများအား ထိပါးစေခြင်းမရှိစေရ၊
ဂ။ အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာများတွင် အန္တရာယ်ရှိသော၊ တိကျမှုမရှိသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ ခြောက်လှန့်စေသော၊ အသရေပျက်စေသော၊ တရားဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီသော သို့မဟုတ် တရားဥပဒေနှင့် လိုက်လျောညီထွေမရှိသော သို့မဟုတ် SAMSUNG၏ အကြောင်းအရာ လမ်းညွှန်မှုများနှင့် မကိုက်ညီသော အချက်များမပါဝင်ရ၊
ဃ။ အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာများတွင် ဆော့ဖ်ဝဲအား ပျက်စီးစေသည့် ဗိုင်းရပ်စ်၊ ကုဒ် သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့တူညီသော အရာများပါဝင်ခြင်းမရှိစေရ။ ထို့ပြင် ပျက်ဆီးစေသော၊ အန္တရာယ်ရှိသော၊ အသုံးပြု၍မရသော ပစ္စည်းမဖြစ်စေရ။ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုများကို အကျိုးသက်ရောက်စေသော သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မှုများကို ကန့်သတ်စေခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာများအား လက်ခံရရှိနေသည့် ပစ္စည်းမဖြစ်စေရ။ အဆိုပါ စက်ကိရိယာသည် SAMSUNG မှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ကိရိယာဖြစ်နေပါစေ သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် ကြားခံအသုံးပြုသူဖြစ်သည့် ဆာဗာ၊ ကွန်ယက်နှင့် ထိုနည်းတူသည့် ကိရိယာများပါ ပါဝင်ပါသည်၊
င။ အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာများသည် မည်သည့်အသက်အရွယ်လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မဆို၊ မည်သည့်အသက်အရွယ် အမျိုးအစားများအတွက် လိုအပ်သည့် ဥပဒေ (တိကျပြီး လုံလောက်ပြည့်မီသော အမျိုးအစားခွဲခြားမှုနှင့် အသုံးပြုသူ၏ အကြောင်း အရာများအား အဆင့်အတန်းခွဲခြားချက်များပါဝင်သည်) သင်နေထိုင်သည့် နေရာဒေသ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုအသုံးပြုနေသည့် နေရာဒေသပေါ်တွင်မဆို၊ မည်သည့်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေနှင့်အညီမဆို အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊ ပြီးလျှင်
စ။ SAMSUNG မှအသုံးပြုသည့် အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အခြားကြားခံသူများအား (ပုံမှန် အသုံးပြုနေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ) ပြန်လည်ပေးချေခြင်းမျိုးများ(လိုင်စင်ကြေး၊ အခွန်အကောက်ကြေး နှင့်အခြားအရာများ)အား SAMSUNG မှ ပေးချေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဆောင်ရွက်ခြင်း တာဝန်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်မှ SAMSUNG အား ပျောက်ဆုံခြင်း၊ ပျက်ဆီးခြင်း၊ တာဝန်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ယခုအာမခံချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းအတွက် ရလဒ်အနေဖြင့် SAMSUNG သို့ ကျခံရမည့် ကုန်ကျစရိတ်များပေးချေရေးနှင့် SAMSUNG အား ထိပါးမှုမရှိစေရေးတို့ကို သဘောတူညီပါသည်။
15. SAMSUNG မှ အာမခံချက်များနှင့် ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ခြင်းများ
ယခု သဘောတူညီမှုတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက SAMSUNG နှင့် ထောက်ပံ့သူများ၊ ပါတနာများနှင့်/ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပူးတွဲရရှိသူများမှ အာမခံချက်အားလုံနှင့် မည်သည်အခြေအနေမဆို ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သို့မဟုတ် ပါဝင်လာသည့် အကြောင်းအရာများအားလုံးအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ၀န်ဆောင်မှုများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည့် အခြေခံဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဖြစ်ပြီး SAMSUNG နှင့် ကန့်သတ်မထားသော ယင်း၏ အထောက်အပံ့ပေးအပ်သူများ ပါတနာများနှင့် သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပူးတွဲရရှိသူများမှ အောက်ပါအချက်များကို အာမခံချက် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါ-
က။ အကြောင်းကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဆို သို့မဟုတ် သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီစေရမည် သို့မဟုတ် သင့်အား အမှားအယွင်းမပါဘဲ ပေးအပ်ထားသည့် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ထိုဝန်ဆောင်မှုများသည် မည်သည့် အရည်အသွေး အဆင့်နှင့်မဆို ရရှိစေနိုင်ပါသည်၊
ခ။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို သင့်အားဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိစေနိုင်ပြီး အနှောင့်ယှက်မရှိ၊ မှားယွင်းမှုမရှိ သို့မဟုတ် နှေးကွေးခြင်းမရှိ သင့်အားပေးအပ်နိုင်ပါသည်၊
ဂ။ သင်နေထိုင်နေသည့် နိုင်ငံသို့မဟုတ် ကမ္ဘာ၏ မည်သည့်အရပ်တွင်မဆို ၀န်ဆောင်မှုများမှ မည်သည့် မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ဥပဒေများအား ချိုးဖောက်ခြင်းများကို မပြုလုပ်ပါ၊
ဃ။ မည်သည့်အချက်အလက်မဆို (နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ်စာဖြင့်ဖြစ်စေ) သင်က SAMSUNG မှ ရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် ရလဒ်အနေဖြင့် (ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များအပါအ၀င်) အားလုံးကို သင့်လျော်စေခြင်း၊ တိကျစေခြင်း၊ ပြည့်စုံစေခြင်း သို့မဟုတ် ကိုက်ညီစေခြင်းများတို့ရှိရမည်၊ ပြီးလျှင်
င။ ၀န်ဆောင်မှုတွင်လိုအပ်သည့်အရာများ (လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြသမှုဆိုင်ရာ အားနည်းမှု၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များ သို့မဟုတ် အခြား ၀န်ဆောင်မှု တစိတ်တဒေသအနေဖြင့် သင့်အားပံ့ပိုးပေးသည့် ဆေ့ာဖ်ဝဲလ်များအား ကိုက်ညီစေခြင်း၊ အမှားပြင်ဆင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ ရှိလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရယူထားသည့် မည်သည့် အချက်လက်များ သို့မဟုတ် ပါဝင်သည့်အချက်များ (ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအပါအ၀င် နှင့် ဖင်းဝဲလ် အား အချိန်နှင့်အမျှ ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ)ကိုမဆို SAMSUNG “အနေဖြင့်” ပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိအနေဖြင့်ရရှိမှု၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများသည် မိမိတာဝန်သာဖြစ်သည်။ SAMSUNG မှ သင်၏ ကိရိယာ သို့မဟုတ် ကိရိယာ၏ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ကွန်ပျူတာစနစ် သို့မဟုတ် အခြား ကိရိယာ သို့မဟုတ် ကိရိယာ၏ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ သို့မဟုတ် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အချက်အလက်များ ပျောက်ပျက်ခြင်းများ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော အချက်လက်များ သို့မဟုတ် ပါဝင်သည့်အချက်များအား အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှုများကို တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏တာဝန်ခံမှုအားလုံးကို ဖောက်ဖျက်ပါက အောက်ပါတို့ နှင့်အညီ တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်
က။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်
ခ။ အကျုံးဝင်သည့် ဥပဒေ သို့မဟုတ် သင်နေထိုင်သည့်တည်နေရာ သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနေသည့် နေရာများမှ သင့်လျော်သည့် တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မှုများအပါအ၀င် ယင်းတို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
SAMSUNG သို့မဟုတ် မည်သည့် ကြားခံသူများသို့ဖြစ်ပွားသော နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များ ဖြစ်သည့် ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် အခြား ကြားခံသူ များအတွက် ကျခံတာဝန်ယူပေးရမည်ဖြစ်သည်။ SAMSUNG မှ ထိုကဲ့သို့ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းများအတွက် သင် သို့မဟုတ် ကြားခံအသုံးပြုသူများအတွက် တာဝန်ခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။
17. SAMSUNG ၏ တာဝန်ရှိမှု
အပိုဒ် ‎17.3ပါ အရ SAMSUNG သည် စာချုပ်တွင် ပါရှိသော၊ တရားမနစ်နာမှုတွင်ရှိသော (လျစ်လျူရှု့ခြင်းတို့ပါဝင်သည့်)၊ သို့မဟုတ် တာဝန်ခံမှုသီအိုရီနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အကြောင်းအရာများကို မလိုက်နာဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများကို ဆမ်ဆောင်းတွင် ဖော်ပြအသိပေးထားပြီး ယင်းဖော်ပြချက်တွင်မပါဝင်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတို့အတွက် တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ ပျက်စီးမှုများမှာ-
က။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ကွင်းဆက်အလိုက်ပေါ်ပေါက်လာသော ပျက်စီးမှုများ၊
ခ။ ၀င်ငွေဆုံးရှုံးခြင်း၊ စီးပွားကျခြင်း အမှန်တကယ်သို့မဟုတ် မျှော်မှန်းထားသည့် အကျိုးအမြတ်များ၊ အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးခြင်း၊ လုပ်ငန်းတန်ဖိုးသို့မဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာညိုးနွမ်းမှုများ (တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ)၊
ဂ။ ပြင်ဆင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှုများသို့မဟုတ် အချက်အလက်များဆုံးရှုံးခြင်း (တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ)၊
ဃ။ အောက်ဖော်ပြပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုများ-
သဘောတူစာချုပ်ပါ အခြေအနေများနှင့် ပုဒ်မခွဲများကိုချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ်ဆမ်ဆောင်းရှိ လျစ်လျူရှုထားသော အပိုင်းနှင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့သူများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရသူများဟု မှတ်ယူနိုင်သော သင်နှင့် SAMSUNG ကြားရှိ သဘောတူစာချုပ်သို့မဟုတ် စာချုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကို ချိုးဖောက်ခြင်း၊
သင့်တော်မှုရှိခြင်း၊ တိကျမှုရှိခြင်း၊ ပြည့်စုံမှုရှိခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း သို့မဟုတ် (က) တည်တံ့သည့် ဝန်ဆောင်မှုများရှိခြင်း (ဆော့ဖ်ဝဲ၊ နည်းပညာ၊ အထောက်အထားများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် လိုအပ်သောပစ္စည်းများရရှိနိုင်ခြင်း)တို့ကြောင့် သင်မှ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် (ခ) ကြော်ငြာခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုရာမှ တွေ့ရှိရသောရလဒ်များ(ပရိုမိုးရှင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပါဝင်သည့်)ကို သင်နှင့်ကြော်ငြာသူ သို့မဟုတ် စပွန်ဆာများကကြေငြာပေးခြင်း၊
ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဆန်းသစ်မှုများ၊ ချဲ့ထွင်ခြင်းများ(သို့မဟုတ်) ကန့်သတ်ထားမှုများ (ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုရာမှတွေ့ရှိရသောသင်၏အဆင်မပြေမှု သံသယများ၊သင့်အကောင့်နှင့် အကောင့်ရှိဒေတာများလွဲပြောင်းလက်ခံရာ၌သို့မဟုတ် ဒေတာပေးသွင်းရာ၌တွေ့ရှိရသော သံသယများပါဝင်ပါသည်) သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကိုယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ချို့ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်း)၊ သို့မဟုတ်/p>
သင့်အကောင့်ရှိဒေတာများကို သင်ကိုယ်တိုင်ထက် အခြားသူများမှ (သင်၏အသိပညာပါရှိမှု/မရှိမှုကိုသတိမပြုမိဘဲ)အသုံးပြုခြင်း။ သင့်အကောင့်ရှိဒေတာများကိုအခြားတစ်ယောက်ယောက်မှအသုံးပြုသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးမှုနှင့်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတို့တွင် SAMSUNG ကိုအလျော်ပေးရန် သင်ကိုယ်တိုင်တွင် ဥပဒေအရအပြည့်အဝတာဝန်ရှိပါသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်များတွင် အချက်အလက်များနှင့် အခြေအနေများချိုးဖောက်မှုတို့အတွက် ဆမ်ဆောင်းက ဥပဒေအရတာဝန်ယူရပါမည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီသိရှိရသော အခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော သဘောတူညီမှုတွင်ပါရှိသည့် ကြိုတင်ခန့််မှန်းထားသော အပျက်အစီးများအတွက် SAMSUNG ၏တာဝန်ယူခြင်းကို ကန့်သတ်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤအချက်အလက်များနှင့် အခြေအနေများ၌ မပါရှိသောအရာများကို SAMSUNG မှထုတ်ပယ်ထားပါသည်
က။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ တာဝန်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်လျော်ညီသော သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှု၊ သေဆုံးမှုတို့အတွက် တာဝန်ယူခြင်းကို ကန့်သတ်ထားခြင်း၊ နှင့်
ခ။ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမှ ထုတ်ပယ်ထားသောသို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော အာမခံမှု သို့မဟုတ် အပျက်အစီးများအတွက် တာဝန်ယူခြင်း သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုများ။ အာမခံမှုများ၊ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အခြေအနေများသို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များကို ထုတ်ပယ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အပျက်အစီးများအတွက် တာဝန်ရှောင်ခြင်း၊ စာချုပ်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် မတော်တဆဖြစ်သော သို့မဟုတ် ကွင်းဆက်အလိုက်ဖြစ်သော အပျက်အစီးများ၊ အချက်အလက်များကို သွယ်ဝိုက်၍ဖောက်ဖျက်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြုသူ၏ဥပဒေက ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသော အတိုင်းအတာကိုအများဆုံး ကန့်သတ်၍ တရားဥပဒေအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော အကန့်အသတ်များသည် အသုံးပြုသူနှင့် SAMSUNG ၏တာဝန်ယူခြင်းနှင့် အာမခံချက်များကို ထောက်ခံပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
18. အင်အားသုံး ဖယ်ရှားခြင်း
Samsung သည် ကျရှုံးသော မည်သည့်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးကိုမဆို ဥပဒေအရတာဝန်မရှိပါ သို့မဟုတ် Samsung ၏သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှုအောက်နှင့် Samsung ၏တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဤသဘောတူညီမှုအောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသောအဖြစ်အပျက်များ အထူးသဖြင့် (တားမြစ်မှုမပါဝင်ခြင်း) (က) ကိုယ်ပိုင် သို့မဟုတ် အများပိုင် တယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက်သွယ်သော လမ်းကြောင်းများမရရှိမှု၊ (ခ) ပြဌာန်းချက်များ၊ တရားဝင်စီရင်ချက်များ၊ ဥပဒေပြုခြင်း၊ အစိုးရ၏စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များ၊ (ဂ)ရိုက်ခတ်မှုများ၊ထုတ်ပယ်ထားခြင်းများ သို့မဟုတ် အခြားစက်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာအနှောက်အယှက်၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အခွန်ရှောင်ခြင်း၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရာမှဖြစ်ပေါ်လာသော ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ စစ်ပွဲ(ကြေညာခြင်းရှိသော/မရှိသော) သို့မဟုတ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စသည့်အဖြစ်အပျက်များကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုရှိခဲ့ပါက Samsung က တရားဥပဒေအရ တာဝန်မရှိပါ။
ဤသဘောတူညီချက်ပါ Samsung ၏လုပ်ဆောင်မှုတွင် သဘာဝအလျောက် သို့မဟုတ် မလွဲသာမရှောင်သာသော အခြေအနေအားဖြင့် တာဝန်ယူခြင်းကို ဖယ်ရှားသည့် အဖြစ်အပျက်များဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါက သံသယများဖြစ်လာနိုင်ပြီး Samsung သည် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအချိန်အပိုင်းအခြားအတွက် အချိန်ကိုထပ်တိုးယူနိုင်ပါသည်။
Samsung သည် သဘာဝအလျောက် သို့မဟုတ် မလွဲသာမရှောင်သာသော အခြေအနေအားဖြင့် တာဝန်ယူခြင်းကို ဖယ်ရှားသည့် အဖြစ်အပျက်များကို သယ်ဆောင်လာခြင်း၊ ဤသဘောတူညီချက်ပါ Samsung ၏တာဝန်အရ အဖြေရှာခြင်းတို့အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အားထုတ်မှုကို အသုံးပြုရလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
19. အခြားအဖွဲ့များ၏ ဆိုဒ်များနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ
ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အခြားဝက်ဆိုဒ်များ("ပြင်ပအရင်းအမြစ်များ")ပါဝင်သော အခြားအဖွဲ့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အကြောင်းအရာအရင်းအမြစ်များနှင့် ဆက်နွယ်နေသော ဟိုက်ပါချိတ်ဆက်မှုများပါဝင်ပါသည်။ Samsung သည် ပြင်ပအရင်းအမြစ်များတွင် ဖော်ပြထားသော သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာများ(ကြော်ငြာများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများပါဝင်နေသော)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှမ်းမိုးခြင်းနှင့် တာဝန်ခံခြင်းတို့မပါရှိပါ။ အဆိုပါအကြောင်းအရာများ(ဆက်သွယ်နိုင်မှု၊ တိကျမှု၊ အသုံးပြုနိုင်မှု သို့မဟုတ် အကြောင်းခြင်းရာ ပြည့်စုံမှုတို့ပါဝင်သော သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှု)ကို ပြင်ပအရင်းအမြစ်များတွင် သင်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုတို့အတွက် တရားဥပဒေအရ တာဝန်မရှိပါ။
သင်သည် အခြားအဖွဲ့မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲ စသည်တို့ အသုံးပြုရာမှ ရရှိလာသော ရလဒ်များကို အချိန်နှင့်အမျှ ဝယ်ယူကောင်းဝယ်ယူပါလိမ့်မည် သို့မဟုတ် အသုံးပြုကောင်းအသုံးပြုမိပါလိမ့်မည်။ သင်မှ အခြားဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုမှုများသည် သင်နှင့်အခြားကြားခံတို့ အကြားတွင် သီးခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည် ကြားခံ နှင့် သင့်အကြားရှိ ဥပဒေအရ ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိပါ Samsung မှလည်း တတိယအဖွဲ့မှ သင့်အား ထောက်ပံ့ပေးအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တို့နှင့် စပ်လျဉ်းကာ တာဝန်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
သင်သည် အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြေအနေများပါဝင် ဖော်ပြထားသော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် အမည်စာရင်းပေးသွင်းသောအခါ ဝန်ဆောင်မှု၏ထူးခြားသော ပုံစံများနှင့် ဝိသေသများကို ဖော်ပြထားပြီး ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဌာန်းချက်အပိုများ (စုဆောင်းထားသည့် အထူးအချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်)ကိုလည်း သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ မည်သည့်အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုမဆို ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြေအနေများနှင့်အတူ ထပ်လောင်းထည့်သွင်းရာတွင်လည်းကောင်း စကားဆက်များတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အခြေအနေများနှင့် အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြားရှိ ပဋိပက္ခများတွင် အထူးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခြေအနေများတွင် အထူးအခွင့်အရေးရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
21. ဤသဘောတူညီချက်ရှိ ဘာသာစကား
Samsung သည် ဤသဘောတူညီချက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်မှုတစ်ခု ကို ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ဤဘာသာပြန်ဆိုပေးခြင်းသည် သင်ကိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက် သီးသန့်ထောက်ပံ့ပေးမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက်နှင့်အခြေအနေများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာပုံစံနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းပုံစံကြားရှိ ပဋိပက္ခသည် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာပုံစံသည် ဘာသာပြန်ဆိုပေးခြင်းပုံစံတွင် အထူးအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။
22. တောင်းဆိုချက်များပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် ဥာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့်နှင့် အခြားရပိုင်ခွင့်များ ကျူးကျော်မှုအတွက် သတိပေးခြင်းများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
Samsung သည် မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် အလွဲသုံးစားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဥပဒေများ ချိုးဖောက်ခြင်း တို့ပြုလုပ်ပါက တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ သတိပေးခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ သို့မဟုတ် အခြားတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ချိုးဖောက်လာသည့် အသုံးပြုသူများ၏အကောင့်များကို (ယာယီဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းဖြစ်စေ) ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် တားမြစ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မူပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှ အခြားဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းတို့အတွက် သတိပေးခြင်းများဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ဖော်ပြထားသော သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ပေးထားသော အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူစိတ်ကျေနပ်မှုတို့အတွက် ဤအီးမေးလ် support@mysamsung.asiaသို့စာပေးပို့စေလိုပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်သောအချက်အလက်များသည် ကန့်သတ်ချက်မပါဝင်ဘဲ Samsung အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပြီး အချက်အလက်များအားလုံးသည် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ရေး သို့မဟုတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်များကို အသိအမှတ်ပြုပေးခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအသိအမှတ်ပြုပေးသော အကြောင်းပြချက်များ သို့မဟုတ် သင့်အတွက်စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဤအချက်အလက်များနှင့် အခြေအနေများတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက သင်သည် (က) အချက်အလက်များကို အချိန်အကန့်အသတ်မပါရှိပဲ လျှို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့် အချက်အလက်များအား Samsung ၏မူလ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ထုတ်ဖော်မပြခြင်း၊ (ခ) သဘောတူညီချက် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်လိုအပ်သော အချက်အလက်များမရှိပါက မှတ်တမ်းမထားခြင်း။
အပိုဒ် ‎23.1 သည် သင်ကထုတ်ဖော်မပြလိုသောအချက်အလက်များကို တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ Samsung တွင် လျို့ဝှက်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော နယ်ပယ်တွင် သင်ထုတ်ဖော်မပြလိုသော အချက်အလက်ကို Samsung တွင် ချက်ချင်း လျှို့ဝှက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Samsung သည် ရေးသားထားသော အချက်အလက်များနှင့် အခြေအနေများကိုသာ မှီခိုထားပါသည်။ ကြော်ငြာများရှိ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ရေးသားထားသော သို့မဟုတ် နှုတ်ဖြင့်သာပြောပြသော ပြန်လည်တင်ပြချက်များ၊ ဖော်ပြချက်များ သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်များကို Samsung မှ သင့်ထံသို့ ခိုင်မာစွာရေးသားဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက ထိုအချက်လက်များနှင့်ချုပ်နှောင်ထားခြင်းမရှိပါ။
Samsung သည် သတိပေးချက်များ(သဘောတူညီချက်ရှိ ပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအား ရပ်စဲခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရပ်စဲခြင်းတို့ပါဝင်သော သတိပေးချက်များ)ကို အီးမေးလ်၊ သာမန်မေးလ်၊ သို့မဟုတ် စာပေးပို့၍သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ Samsung သည် ဤသဘောတူညီချက်တွင် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းကို မကျင့်သုံးပါက သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးရန် တွန်းအားမပေးပါက တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေရှိ Samsung ၏အကျိုးကျေးဇူးကို Samsung အခွင့်အလမ်း၏ ပုံမှန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် တစ်ခုအနေဖြင့် သို့မဟုတ် Samsung တွင်ကျန်ရှိနေမည့် တရားဝင်လျော်ကြေး သို့မဟုတ် အခွင့်အလမ်းများကို တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤသဘောတူညီချက်ပါ ပြဌာန်းချက်များသည် ဆီလျော်မှုမရှိခြင်း၊ တရားမဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဥပဒေကို လိုက်နာစေခြင်းမရှိပါက (တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့်) ထိုအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ထားသော တရားစီရင်ခြင်းအရ ကျန်ရှိနေသော ပြဌာန်းချက်များတွင် ဆီလျော်မှုရှိခြင်း၊ တရားဝင်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းတို့ ပါဝင်နေသော်လည်း ဥပဒေသက်ရောက်မှုမရှိပါ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်စေပါသည်။
Samsung ၏နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုချင်းစီသည် သဘောတူညီချက်၌ အခြားအုပ်စုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဥပဒေကိုတိုက်ရိုက်လိုက်နာရန် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးထားခြင်းနှင့်၎င်းကို (သို့မဟုတ် ရပိုင်ခွင့်) အကျိုးရှိစေသော ဤသဘောတူညီချက်ပါ ပြဌာန်းချက်များပေါ်တွင် မှီခိုနေပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်ကို ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်မှုများသည် အခြားအုပ်စုအတွက် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဤသဘောတူညီမှုအောင်တွင် ပါရှိသော Samsung ပါမူလရေးသားဖော်ပြထားသော ခွင့်ပြုချက်ဖြစ်သည့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် သင့်အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် တာဝန်များနှင့်သက်ဆိုင်သော သဘောတူညီချက်ကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
ဤသဘောတူညီချက်တွင်ပါရှိသော သင်နှင့် သဘောတူညီချက်တို့၏ ဆက်နွယ်မှုသည် ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ၏ ပဋိပက္ခများမပါဝင်ဘဲနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ တရားရုံးများ၏ တရားစီရင်မှုနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ သဘောတူညီချက်ရှိ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ဥပဒေများနှင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို၍ လွှမ်းမိုးထားပါသည်။ Samsung သည် တရားစီရင်ခြင်းများတွင်ပါရှိသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များ (သို့မဟုတ် ဥပဒေဆိုင်ရာတွင် သက်သာရာရစေသည့် တူညီသောအမျိုးအစားတစ်ခု)ကို ထောက်ခံပေးပါသည်။